Ogaden News Agency (ONA) – EU & AU oo Heshiis Ka Gaadhay Arimaha Tahriibka.
EU & AU oo Heshiis Ka Gaadhay Arimaha Tahriibka.
Wadamada France, Germany, Italy iyo Spain ayaa sheegay inay dalalka Chad iyo Niger ka caawin doonaan qorshe lagu xakamaynayo dadka Tahriibta ku yimaada dalalka Yurub.
Shirka looga hadlayey Tahriibta oo uu marti geliyey Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shalay ka dhacay magaalada Paris, wafuuda ka timid Afrika ayaa waxaa kamid ahaa hogaamiyayaasha dalalka Chad, Niger iyo xukuumada caalamka ictiraafsan yahay ee Liibiya.
Madaxweynaha France Macron ayaa heshiiskan ku tilmaamay kii ugu wanaagsanaa oo illaa iyo hada laga gaadho arrimaha Tahriibta badan ee kusoo qul quleysa dalalka Yurub. Haweenayda hogaamisa Germany Angela Merkel ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabo in la kala saaro dadka tahriibayaasha ah, isla markaana gargaarka ay u baahan yihiin lasiiyo dadka qaxootiga rasmiga ah ee cabsida uga soo cararay wadamadooda.
Weli faah faahin lagama bixin qaabka qorshahan loo hirgelin doono, waxaana kamid ah mashruucan in dalalka Afrikaanka ah laga caawiyo illaalinta xaduudahooda. Balse dhawaan ayaa la filayaa in guddi loo saaray arrimaha ay kormeer ku tagaan wadamada Afrika ee xeryahan laga dhisi doono.